Apple Inoburitsa Dhijitari Beta Vhezheni dzeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, uye tvOS 11.2.5 | IPhone nhau
Zvinotaridza kuti zvinhu zvese zviri kudzoka zvakajairwa zvishoma nezvishoma mushure memazuva mashoma ezororo reKisimusi kuApple. Mune ino kesi isu tine ese mavhezheni beta yeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, macOS 10.13.3 uye tvOS 11.2.5 mumaoko evanogadzira.
Pane ino chiitiko uye uchisvika mushure memazuva mashoma e "general shutdown", hazviite kunge pane chero nhau maererano nemabasa anoitwa mune beta vhezheni, asi senguva dzose, ichave nguva yekumirira iyo zvimwe zvakadzama mushambadzi ongororo pane idzi beta vhezheni yakaburitswa maminetsi mashoma apfuura kuti uwane shanduko kana nhau dzinopfuura kugadzirisa bug uye kugadzirisa kugadzikana.
Chii chiri chokwadi ndechekuti mune izvi yechitatu beta vhezheni yemasisitimu akasiyana uyu mutemo wekusachinja chinongedzo kana sarudzo dzinowanikwa musystem zvakanyanya uye kugadzirisa zvinogona kuitika zviputi, zvikanganiso uye mamwe matambudziko akaonekwa mune yapfuura beta vhezheni inochengetwa. Sezvazvinowanzoitika mukuburitswa uku, kana paine nhau dzakakosha mune chero eaya beta, isu tichagovana newe mune ino imwe nyaya kana mune imwe nyowani kana zvichidikanwa.
Dzese dziripo zvekutora pasi pawebhusaiti yekuvandudza. Kana usiri mugadziri, zvakanakisa kuti ugare kunze kwavo kudzivirira matambudziko anogona kuitika kana kusaenderana nemaapplication atinoshandisa pane yedu iPhone, iPad, Apple TV kana kunyange Apple Watch. Rangarira zvakare kuti mune iyo Apple Watch iwe haugone kusiya iyo beta chirongwa iyo yakagadzirirwa vateereri, saka zviri nani kuti ugare kunze kwayo. Kune imwe SO isu tine mukana wevanhu paruzhinji betas, uye inyaya yenguva diki kuti Apple ivhura navo kana tichida kuiisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple inoburitsa yekuvandudza beta shanduro dzeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, uye tvOS 11.2.5